Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Emirates hanolotra sidina fanampiny mankany Stockholm
Nanambara i Emirates androany fa hampiditra sidina fanampiny telo isan-kerinandro mankany amin'ny renivohitra Soeda izy, hameno ny fandaharam-potoanan'i Emirates misy ary hanome safidy bebe kokoa ho an'ireo mpandeha ny 8 desambra 2017.
Hanampy ireo sidina vaovao voalahatra hamaly ny fangatahana mandeha amin'ny zotra, indrindra mandritra ny ririnina. Hatramin'ny nandefasana ny serivisy nomaniny isan'andro natao tamin'ny volana septambra 2013, Emirates dia nanohy nitombo ny fangatahana fitsangatsanganana anatiny sy ivelany. Ny fampidirana ireo sidina telo fanampiny isaky ny zoma, asabotsy ary alahady dia valin'ny fitomboan'ny fangatahana.
Ireo sidina telo vaovao isan-kerinandro dia hanatsara ny fifandraisana maharitra any Suède, izay manome ny mpandeha mandeha avy any Stockholm ny fahafaha-manatratra tanjona 70 any Emirates any Azia, Australasia, Afrika ary Moyen Orient.
Ny sidina Emirates EK155 vaovao dia hanomboka amin'ny 8 desambra, hiala an'i Dubai amin'ny 1500, tonga ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Stockholm Arlanda tamin'ny 1845. Ny sidina EK156 hiverina dia hiainga ARN amin'ny 2110 tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Dubai amin'ny 0630 ny andro manaraka.
Ny fotoanan'ny sidina telo fanampiny dia manome fifandraisana mora kokoa eo Stockholm sy toerana maro malaza any Azia Atsinanana sy Afrika. Afaka mifandray tsy misy fotony izao ny mpandeha, miaraka amina fitaterana fohy mamakivaky ny ivon-toeran'ny Dubai manerantany, miaraka amin'ireo toerana malaza toa an'i Ho Chi Minh City any Vietnam, Colombo any Sri Lanka, Manila any Filipina ary Cape Town ary Durban any Afrika Atsimo. Afaka mampifandray ny sidina mivantana ataon'ny Emirates any Auckland any Nouvelle-Zélande ihany koa ny mpandeha miaraka amin'ny fotoana fitsangatsanganana mankany amin'ny toerana itodiana any amin'ny Ranomasimbe Indianina toa an'i Maorisy, Maldives (Lehilahy) ary Seychelles (Mahé) izay mahazo tombony amin'ny fifandraisana tsara kokoa amin'ny sidina.
Ny fotoanan'ny sidina vaovao dia mahatonga an'i Dubai ho safidy tsara kokoa ihany mandritra ny faran'ny herinandro lava na fiatoana kely, ny fotoana ahatongavana vao maraina mamela ireo mpandeha avy any Suède tontolo andro hanomboka fialantsasatra na fiatoana kely any UAE.
Ary koa ny fanomezana safidy sy fanamorana ho an'ny mpanjifa soedoà mandeha any Dubai sy any ankoatry ny asa na fialam-boly, ny fiasan'ny mpandeha sy ny entana ao Emirates dia nisy fiatraikany tsara tamin'ny fizahan-tany, varotra, fampiasam-bola ary asa any Suède. Vonona ny hiorina amin'ny anjara birikiny ara-toekarena sahady izy, manantena i Emirates fa ny sidina telo fanampiny isan-kerinandro manelanelana an'i Dubai sy Stockholm dia samy hihaona amin'ny fangatahana efa misy ary handrisika ny fitomboan'ny varotra sy ny isan'ny mpitsidika.
Miara-miasa amin'ny fiaramanidina malaza Boeing 777-300ER any Emirates amina fanamboarana kilasy telo, ireo sidina vaovao, toy ny sidina isan'andro voalahatra, dia hanolotra Suites Private valo ao amin'ny Kilasy Voalohany, misy varavarana mikorisa mandeha ho azy ho an'ny fiainana manokana sy fisotroana manokana; Seza fisaka 42 amin'ny raharaham-barotra ary seza malalaka 310 amin'ny Toekarena.
Ireo mpandeha mandeha amin'ny First and Business Class dia mankafy ny fidirana Premium Lounge ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Stockholm Arlanda ary koa ny serivisy fiara fitaterana Chauffeur maimaim-poana ataon'ny Emirates izay manome fitaterana mankany sy avy amin'ny seranam-piaramanidina ao anatin'ny radius 60km.
Tahaka ny sidina Emirates rehetra, ny mpandeha mandeha amin'ny sidina Stockholm telo fanampiny isan-kerinandro dia afaka manararaotra ny tambin-karama malala-tanana hatramin'ny 35kg amin'ny Toekarena, 40kg amin'ny orinasa ary 50kg amin'ny Kilasy voalohany.
Ao anaty sambo, afaka mahita ny mpandeha ranomandry Digital Widescreen, manolotra fantsona audio sy sary an-tsary maherin'ny 2,500 ao anatin'izany ny sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra, mozika, boky audio ary lalao vaovao. Ny mpanjifa dia afaka mankafy ny fandraisam-bahiny malaza eto an-tsambo avy amin'ny ekipan'ny kabinetran'ny firenena maro any Emirates, ary koa ny lovia nomanina ho an'ny faritra misy zava-pisotro misy alikaola.
Ny fandaharam-potoanan'ny sidina misy ankehitriny: EK 157 dia miala ao Dubai amin'ny 0810 tonga ao ARN amin'ny 1155, ny sidina EK158 miverina dia miala amin'ny ARN amin'ny 1335, miverina any Dubai amin'ny 2255.
Heathrow Fanampiana manokana an'ny mpanjifa eo amin'ny Spotlight
Fihetsika iray hidiran'ny Hawaiian Airlines amin'ny Oneworld? Fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny Japan Airlines